अन्तर्वार्ता – Page 57 – Etajakhabar
“प्रधानमन्त्री ज्यु, कांग्रेस जस्तो मौन नभई भारतीय दादागिरीको अन्त्य गरेर आउनुहोला” देव नारायण यादव – (भिडियोसहित)
काठमाडौं । सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली नागरिकाहरुले सुरक्षाको प्रत्याभुति कहिले नपाइको गुनासो व्याप्त छ । उनीहरुले हरेक दिन भारतीय सीमा सुरक्षा वलको ज्यादती खेपिरहेका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा हालसम्म दर्जन नागरिकले भारतीयको व्यावाहारले ज्यानसमेत गुमाउनु परेका घटना हाम्रो अगाडी प्रस्ट नै छन् । दिन हुँ को हैरानीले नेपाली नागरिकहरुले सरकार जिउँदैै मरेको आभास गर्दैआएका छन् । नेपाली नागरिकमाथि आक्रमण म...
राजेन्द्र लिङ्देनको प्रश्नः आरक्षण मलाई कि मेरो घरमा काम गर्ने बाहुन बाहुनीलाई ?
काठमाडौं - राजेन्द्र लिंदेन राप्रपाका महामन्त्री र संसदमा एक मात्र सांसद हुन् । वाम गठबन्धनको समर्थनमा सांसद निर्वाचित भएका लिंदेन जनजाति भए पनि जातीय आरक्षणको विरोधी हुन् । उनी संविधानले सबै समुदायलाई बराबर अधिकार दिएको बताउँदै अब राज्यले वर्गीय आधारमा आरक्षण गर्नुपर्ने बताउँछन् । युरोपियन युनियनले खसक्षत्रीलाई दिएको आरक्षण हटाउनु पर्ने प्रतिवेदन दिएको सन्दर्भमा लिंदेनसँग अत्यन्त पठनीय ठानेर च...
३५ प्रतिशत युवा हृदयघातको जोखिममा, कसरी बचाउने मुटु ? ग्राण्डि इन्टरनेशनलका मुटुरोग विशेषज्ञ मिलन प्रकाश श्रेष्ठको यस्तो छ सुझाव (भिडियो सहित)
काठमाडौं - अहिले नेपालमा हृदयाघातका कारण मृत्यु हुने मानिसको संख्या बढ्न थालेको छ त्यसमा पनि युवा अवस्थामै हृदयघातका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या बढेको छ । विश्वमा मृत्यु हुनेमध्ये २५ देखि ३५ प्रतिशत मानिस हृदयाघातले ग्रसित भएको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन् । यो रोगले मानिसलाई कुनवेला आक्रमण गर्छ भन्ने टुंगै हुँदैन । पछिल्लो समय यो रोगबाट ग्रसित हुने युवाको संख्या पनि ठूलो छ । विश्व स्वास्थ्य...
काठमाडौं । लामो समय विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय युवा नेता दीपक हुमागाईँ पछिल्लो केही वर्षयता परिवारका साथ अमेरिका बस्दैआएका छन् । हालै नेपाल आएको बेला नेपालआजका लागि पनि उनले समय मिलाए । नेपालआजकर्मी नेत्र पौडेलले उनीसँग केही दिनअघि विशेष कुराकानी गरेका छन् । झण्डै आधा घण्टा लामो अन्तरवार्तामा उनले नेपालको राजनीतिक प्रबृत्तिमाथि टिप्पणी गरे । माओवादी युद्ध, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, व...
दिल्लीमा भारतिय पत्रकारलाई सन्दिपको खरो जवाफ, पत्रकारले हिन्दीमा प्रश्न सोध्न खोज्दा सन्दिप गरे ठाडै अस्वीकार ! दिए अग्रेजीमा गतिलो जवाफ ( भिडियो सहित )
काठमाडौं - नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका युवा स्पिनर सन्दीप लामिछाने यतिबेला इन्डियन प्रिमियरको बन्द प्रशिक्षणका लागि दिल्लीमा रहेका छन् । विश्वका उत्कृष्ट खेलाडी रहेका दिल्लीको बन्द प्रशिक्षणमा सन्दीपले आफ्नो प्रभाव टिममा देखाउन सुरु गरेका छन् । युवा लेग स्पिनर सन्दीप दिल्ली पुगेपछि उनका बारेमा दिल्ली डेयरडेभिल्सले विभिन्न ट्विट्सहरु गर्दै आएको छ । दिल्लीका प्रशिक्षक रिकी पोन्टिङले पनि सन्दीप...
“गाइ काटेर खान्छु भन्नेले किन कुकुर काटेर खान्छौ नभनेको?” सांसद राजेन्द्र लिङ्देन (भिडियो)
काठमाडौं - राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टीका एक मात्र संसद राजेन्द्र लिङ्देनले गाई काटेर खानु प्रति घोर बिरोध र आपत्ति जनाएका छन्। उपसभामुख राधिका तामाङ्गले गाई काटेर खानु पाउनु पर्छ भन्ने कुरा भने पनि नभने पनि यो अशोभनीय छ । अहिलेको शताब्दीमा गाइ मात्रै हैन कुनै पनि जनावरलाई काटेर खानु हुदैन । पशु अधिकार को कुराहरु छन् त्यसैले पनि यस्तो कुरा गर्नु उचित छैन । त्यसै माथि राष्ट्रिय जनावर गाई खानु...
‘संविधान बनाउँदा नोकर बनेकाहरुले आज मालिक बन्न खोजेर हुन्छ ?’ गोराहरुको चित्त बुझाउन झण्डा परिवर्तनको खेल भइरहेको छ (भिडियो)
काठमाडौं । युरोपेली युनियन (ईयू)को निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमाथि यतिबेला सदनसम्मै बहस भएको छ । विभिन्न नागरिक समाजदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले उक्त प्रतिवेदनमाथि आपत्ति प्रकट गरे । ईयूलाई नेपालले दिएको कार्यदेशभन्दा बाहिर गएर नेपालको राजनीतिक र समाजिक सद्धभावलाई नै खलल पुग्ने गरेर हस्तक्षप गुर्नको काणरबारे यसो भन्छन्, राजनीति तथा परराष्ट्र मामिला जानकार अरुणकुमार सुवेदी । संविधान बनाउदा नै ई...
उपसभामुखज्यु, सात बर्षिया बालिका बलात्कार हुँदा चुप लाग्ने अहिले गाई काटेर खान पाउनु पर्छ भन्ने ? बोल्दा विचार पुर्याउनु होला, नेपालीहरु सधै माला जपेर बस्दैनन् (भिडियो)
काठमाडौं । प्रदेश ३ की उपसभामुख राधिका तामाङले देश धर्म निरपेक्ष भइसकेको भन्दै गाई काटेर खान सकिने कानुन बनाउनुपर्ने बताएपछि उनको चर्को आलोचना भएको छ । उपसभामुख तामाङको उक्त अभिव्यक्तिको यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा पनि कडा आलोचना भइरहेको छ । सो विषयलाई लिएर हिन्दु धर्मावलम्बीहरुले राज्यको जिम्मेवारी पदमा बसेको मानिसले यस्तो कुरा बोलेको भन्दै यसले धार्मिक सम्प्रदायबीचको दन्द्व सिर्जना हुने प्रतिक्...
अभिभावक विहिन क्रिकेट खेलाडी भन्छन् ‘खै हाम्रो खेल्ने ठाउँ ?’ (भिडियो)
काठमाडौं - नेपाली क्रिकेट टोलीले एक दिवसिय मान्यता पाएर क्रिकेटको क्षेत्रमा ऐतिहांसिक सफलता दिलायो । यसले क्रिकेटका खेलाडी एवं क्रिकेटलाई लाई माया गर्नेहरुमा उत्साह पैदा गरेको छ । तर क्रिकेट खेल र खेलाडीको अभिभावकमा रुपमा रहेका नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) निस्कृय छ । अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट संघले नेपाल क्रिकेट संघलाई विघटन गरेको अवस्था छ । खेलाडीले आफ्नै बलबुतामा यतिधेरै सफलता हासिल गर्दा समेत सरका...
काठमाडौं - काठमाडौँ कपनमा सुशान्त खत्री चर्चित डान्सर हुन् । उनी भारतको चर्चित रियालिटी सो ‘डान्स प्लस सिजन २’का फाइनलिस्ट थिए । स्टार प्लसबाट आउने उक्त कार्यक्रममा सोही कार्यक्रमका जजका साथै चर्चित डान्सर रेमो डिसुजाले उनलाई बिजेता समेत घोषणा गरेका थिए । पढाईमा अगाडी रहने सुशान्त नृत्यमा लागेपछि उनको परिवारले उनलाई डान्स गर्ने रोकेका थिए । कक्षा १२ अध्ययनरत सुशान्तले डान्स प्लसमा आउनु अघि सन् ...
Previous 1 … 56 57 58 … 79 Next
-18429 second ago
-17505 second ago
-9604 second ago
-8752 second ago
-8189 second ago
-2332 second ago
-198 second ago